Panasonic က Cm402 Nozzle China Manufacturers & Suppliers & Factory
Panasonic က nozzle
Panasonic က Cm402 Nozzle - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Panasonic က Cm402 Nozzle ထုတ်ကုန်များ)
ဒါခေါ်မန်နေဂျာအမှန်တကယ်တစ်အလားအလာမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသာမန်ဝန်ထမ်းထံမှကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပြီးစာရင်းကိုင်အလုပ်၏စစ်ပြန်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးအဖြစ်လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်ဒါခေါ် "Panasonic က Manager ကတက္ကသိုလ်" တွင်ကိုးနှစ် (တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရခြောက်နှစ်)...
ဦးခေါင်းရုံးဒါကပြည်တွင်းရေးရန်ပုံငွေပမာဏကိုနှစ်ခုသတ်မှတ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်စုစုပေါင်းအရင်းအနှီးအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်မှ "[ပြည်တွင်းရေးရန်ပုံငွေများထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပထမ fixed ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ်ဦး fixed မြို့တော်အဖြစ်စက်ရုံတည်ထောင်ဘို့လိုအပ်ကုန်ကျဖြစ်ပါသည် ။...
modular အမြင့်မြန်နှုန်းနေရာထားရှိစက် စက်မှုလုပ်ငန်း-0.06 s ကို / ချစ်ပ် (60,000 cph) တွင်•အမြင့်ဆုံးကုန်ထုတ်စွမ်းအားအဆင့်ကို •လွယ်ကူစွာသုံးစွဲဖို့, ထိရောက်နှင့်အချိန်ကယ်တင် •အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Model ID CM402-L Model No. KXF-4Z4C PCB dimensions (mm) L 50 x W 50 to L 510 x W...
အင်္ဂါရပ်များ ပုံနှိပ်ခြင်း, နေရာချထားခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေး သငျသညျထုတ်လုပ်ရန်အတွက် PCB ပေါ် မူတည်. သငျသညျအမြင့်မြန်နှုန်း mode ကိုသို့မဟုတ်မြင့်မားသော-တိကျမှန်ကန်မှု mode ကိုရွေးနိုင်သည်။...
NPM-TT အမွှာဗန်းစည်းဝေးပွဲကိုပလက်ဖောင်း အီလက်ထရွန်းနစ်စည်းဝေးပွဲကိုလိုအပ်ချက်များကိုတိုးချဲ့နှင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် NPM ပလက်ဖောင်း 1.Introducing, အ NPM-TT (Next ကိုထုတ်လုပ်မှုရွေ့ပြောင်း-Twin Tray ထဲမှာ) Panasonic`s သည်အခြားဆုရမော်ဒယ်များနှင့်အတူနေရာမှကြာပါသည်။ အရှင်အပြည့်အဝလွတ်လပ်စွာ-run လမ်းသွား...
လက်ရှိတွင်စျေးကွက်၌နေရာချထားသောစက်များကိုမုတ်သုန်ပုံစံနှင့်ဆုံလည်အမျိုးအစားခွဲခြားထားပြီးသူတို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှစ်ခုသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ MTKA008813AA Panasonic AI CUTTER RHS2B အပိုင်းနံပါတ်: MTKA008813AA ပစ္စည်းအမည်: ဖြတ် အခြေအနေ - အသစ်စက်စက် အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic စက် Shenzhen Keith...
N610071899AA Panasonic AI အာရုံခံကိရိယာ
N610071899AA Panasonic AI အာရုံခံကိရိယာ အပိုင်းနံပါတ်: N610071899AA ပစ္စည်းအမည်: အာရုံခံကိရိယာ အခြေအနေ - အသစ်စက်စက် အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic
မော်ဒယ်နံပါတ်။: N610082974AA N610135714AA N610135715AA N610158236AA
N610135714AA N610135715AA Panasonic AI LEVER အပိုင်းနံပါတ်: N610082974AA N610135714AA N610135715AA N610158236AA ပစ္စည်းအမည်: LEVER အခြေအနေ - အသစ်စက်စက် အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic စက် Shenzhen Keith Electronic Equipment Co, Ltd "Shenzhen, Baoan ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် AI နှင့် SMT ပစ္စည်းကိရိယာများ၊...
0308037K07 Panasonic AI JVK ရိုးတံ
မော်ဒယ်နံပါတ်။: 102030803705 0308037K06 102030804101 102030803704 1083513039 1020308050 1020308041 102030805001 1020
0308037K07 Panasonic AI JVK ရိုးတံ အပိုင်းနံပါတ်: 102030803705 0308037K06 102030804101 102030803704 1083513039 1020308050 1020308041 102030805001 1020308052 ပစ္စည်းအမည်: ရိုးတံ အခြေအနေ - အသစ်စက်စက် အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic Machine JVK Shenzhen Keith Electronic Equipment Co, Ltd "Shenzhen, Baoan ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။...
မော်ဒယ်နံပါတ်။: N610071920AA X02P58000
N610071920AA Panasonic က AI ကို RL131 RL132 RG131 လမ်းခွဲ အပိုင်းနံပါတ်: N610071920AA X02P58000 ပစ္စည်းအမည်: RL131 RL132 RG131 လမ်းခွဲ အခြေအနေ - အသစ်စက်စက် အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic စက် RL131 RL132 RG131 Shenzhen Keith Electronic Equipment Co, Ltd "Shenzhen, Baoan ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် AI နှင့် SMT...
X805-324 Panasonic AI RH3 ပိုးဝင်ရောက်မှု CAM
X805-324 Panasonic AI RH3 ပိုးဝင်ရောက်မှု CAM အပိုင်းနံပါတ်: X805-324 ပစ္စည်းအမည်: ပိုးကောင်များ CAM အခြေအနေ - တရုတ်မှအသစ်စက်စက် အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic Machine RH3 Shenzhen Keith Electronic Equipment Co, Ltd "Shenzhen, Baoan ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် AI နှင့် SMT ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အပိုပစ္စည်းများ၊...
308382100106 3083821001 308382100102 304692 304692102102 3046921013 304692100 Panasonic WA CABLE AVK2 AVK2B အပိုင်းနံပါတ်: 308382100106 3083821001 308382100102 304692 304692102102 3046921013 304692100 ပစ္စည်းအမည်: WA CABLE အခြေအနေ - တရုတ်မှအသစ်စက်စက် အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic စက် AVK2 AVK2B Shenzhen Keith Electronic...
Panasonic CM402 CM602 NPM 12 / 16MM FEEDER KXFW1KS6A00 အပိုင်းနံပါတ် - KXFW1KS6A00 ပစ္စည်းအမည်: လမ်းခွဲ အခြေအနေ: မူရင်းအသစ် အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic စက် CM402 CM602 NPM အောက်ပါ SMT အပိုပစ္စည်းများ၏မူရင်းနှင့်အသစ်များကိုဤကုမ္ပဏီတွင်ရောင်းချနိုင်သည်။ PANASONIC CM402 CM602 NPM 8mm FEEDER KXFW1KS5A00 PANASONIC CM402 CM602...
Panasonic AI စက်အပိုပစ္စည်းများ AVK2, AVK2B, AVK3 အပိုင်းနံပါတ် : SY3140-5LZ N411SY31-393 ပစ္စည်းအမည် : SOLENOID Valve အခြေအနေ : Orignal အသစ်
N411SY34-413 SY3440-5LZ Panasonic AI SOLENOID Valve အပိုင်းနံပါတ် : SY3440-5LZ N411SY34-413 ပစ္စည်းအမည် : SOLENOID Valve အခြေအနေ : အသစ်သော Panasonic AI စက်အပိုပစ္စည်းများ AVK2, AVK2B,
အပိုင်းနံပါတ် : N610022081AA ပစ္စည်းအမည် : IO LOAD ဘုတ်အဖွဲ့ အခြေအနေ : မူရင်း အသစ် မူရင်း Place: Janpan Shenzhen Keith Electronic Equipment Co, Ltd "Shenzhen, Baoan ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် AI နှင့် SMT ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အပိုပစ္စည်းများ၊...
မော်ဒယ်နံပါတ်။: N610008758AA N610063804AA
အပိုင်းနံပါတ် : N610008758AA N610063804AA ပစ္စည်းအမည် : IO LOAD ဘုတ်အဖွဲ့ အခြေအနေ : မူရင်း အသစ် မူရင်း Place: Janpan Shenzhen Keith Electronic Equipment Co, Ltd "Shenzhen, Baoan ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် AI နှင့် SMT ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အပိုပစ္စည်းများ၊...
မော်ဒယ်နံပါတ်။: N510019399AA N643MBF0-609 N510009595AA
N510019399AA Panasonic က AI အ Ball SCREW အ အပိုင်းအရေအတွက်: N510019399AA N643MBF0-609 N510009595AA item အမည်: ဘောလုံးကို SCREW အ အခြေအနေ: မူရင်းနယူး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် AV131 Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း Co. , Ltd "။ ဒါဟာတရုတ်အတွက် AI အများနှင့် Smt...
N610082092AA N610082094AA N610082093AA Panasonic ကအာဣမြို့လီဗာ
PANASONIC AI အပိုပစ္စည်း RL132 N610082094AA / N610082093AA CLINCH လီဗာ အပိုင်းအရေအတွက်: N610082094AA / N610082093AA item အမည်: လီဗာ SP2 / SP3 CLINCH အခြေအနေ: မူရင်းနယူး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic က စက်: RHS2B, RHS စီးရီး Describtion Part Number N610082094AA / N610082093AA Apprication Panasonic AI machine RHS2B,RHS...
N510065514AA Panasonic က AI အဆို့ရှင်
N510065514AA Panasonic က AI အဆို့ရှင် အပိုင်းအရေအတွက်: N510065514AA item အမည်: Valve အခြေအနေ: မူရင်းနယူး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic
104132102103 N610115312AA Panasonic က AI အလီဗာ
မော်ဒယ်နံပါတ်။: 104132102103 N610115312AA
104132102103 N610115312AA Panasonic က AI အလီဗာ အပိုင်းအရေအတွက်: 104132102103 N610121531AA 104132102101 104132102102 108712101801 N210057771AA N610115312AA item အမည်: လီဗာ အခြေအနေ: မူရင်းနယူး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် AV131, AVK3, AVK,...
မော်ဒယ်နံပါတ်။: N210154808AB N210154808AA
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210154808AB ဖြီး အပိုင်းအရေအတွက်: N210154808AB item အမည်: ဖြီး အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း Co. , Ltd "။ ဒါဟာတရုတ်အတွက် AI အများနှင့် Smt...
Panasonic က CM / NPM စက်များအတွက် N210081355AB ပန်းကန် အပိုင်းအရေအတွက်: N210081355AB item အမည်: ပန်းကန် အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း Co. , Ltd "။...
Panasonic က CM / NPM Machine ကိုများအတွက် KXFA1NJAA00 လမ်းညွှန်သံမဏိ အပိုင်းအရေအတွက်: KXFA1NJAA00 item အမည်: လမ်းညွှန် အခြေအနေ: တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် CM402, CM602, NPM Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း Co. , Ltd "။ ဒါဟာတရုတ်အတွက် AI...
Panasonic က Cm402 Nozzle Panasonic က CM402 nozzle Panasonic က Smt CM402 nozzle Panasonic က CM402 1001 nozzle Panasonic က Smt CM602 nozzle Panasonic က Smt Npm nozzle Panasonic က Smt CM402 450 nozzle Panasonic က Smt BM nozzle